के बोईगं ७३७ म्याक्स ८ सुरक्षित छ ? « LiveMandu
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १४:०९
गतवर्षको लायन एयर दुर्घटना र अहिलेको इथोपियन एयरलाइन्सको दुर्घटनाको समान प्रकृति, पाइलटले उडेको केहि बेरमै गुमाएको नियन्त्रण अनि जहाजको नोज पिच तलमाथि र म्यानुअल र अटोमेटिक कन्ट्रोलको दुविधाले दुइवटा बिशाल ७३७ म्याक्स ८ खसेको छ अनि सैयौंको ज्यान गएको छ । तत्कालै चीन सरकाले आफ्ना सबै एयरलाइन्सलाई म्याक्स ८ ग्राउण्डेड गर्न निर्देशन दियो, अमेरिकी कम्पनी बाइगंको यस मोडल क्रमश विश्वभरि नै अहिले ग्राउण्डेड भइरहेको छ । अनि प्रश्न छ कि के के बोईगं ७३७ म्याक्स ८ सुरक्षित छ ? इथोपियन एयरलाइन्सको म्याक्स ८ केवल ४ महिना पुरानो जहाज थियो तर उडेको ६ मिनेटमै त्यस जहाज खसेको थियो । गत अक्टोबरमा इण्डोनेशीयाको लाइन्स एयरको म्याक्स ८ मा पनि यस्तै समस्या देखिएको र दुर्घटना भएको थियो ।
म्याक्स ८ मा एमक्यास भन्ने अटोमेटिक सिस्टम छ जस्ले जहाजको पुच्छर तल गएमा स्वत माथि ल्याउने र सन्तुलन गर्ने गर्दछ । लाइन एयरको समयमा चाँही कम्प्यूटरले फल्स अलार्म र गतल सूचना ककपिटमा पठाएको अनुसन्धानले देखाएको छ । अटोपायलट र म्यानुअल बिचको द्धन्दात्मक अवस्थाले जहाजको सन्तुलन बिग्रेको र दुर्घटना भएको रिपोर्ट छ ।
हुन त बोइगं ७३७ विश्वकै सर्वाधिक सफल एयरक्राफ्ट त हो र एयरबस ३२० को तुलनामा यसका फिचरहरु निकै राम्रो र क्षेत्रफल धेरै रहेको हवाईयात्राका पारखीहरु बताँउदछन् । बोइगं ७३७ का दशौं हजार जहाजहरु विश्वमा सञ्चालनमा आएको तथ्याकं छ । अब म्याक्स ७३७ कतिको सुरक्षित हो भन्ने बिषयमा चाँही दुर्घटनाको अनुसन्धान रिपोर्ट आएपछि मात्र भन्न सकिने छ तथापि उक्त जहाजमा प्राविधिक समस्या आएको भनें पक्का हो तसर्थ अहिलेलाई यस मोडलमा यात्रा नगर्न सुझाव दिइएको छ ।
विश्वभर अहिले ३५० वटा यस मोडलका जहाजहरु सञ्चालनमा थिए र ५००० वटा यस मोडलको अर्डर रहेको देखिन्छ । सन् २०१७ बाट म्याक्स ८ बजारमा आएको हो तर इथोपियन दुर्घटनापछि यसको दैनिक ग्राउण्डेड हुने दर बढ्दो छ । अमेरिकी कम्पनी भएकाले पनि हुनसक्छ अमेरिकी उड्ययन प्राधिकरण भनें यस विषयमा मौन छ ।
अमेरिकन , यूनाइटेड र साउथवेस्ट एयरलाइन्सले यस जहाजलाई दैनिक रुपमा नै उडाइरहेका छन् । नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीसंग यस मोडलमा जहाजहरु छैनन् तथापि विदेशमा रहेका धेरै नेपालीजनहरु यस मोडलमा यात्रा गरिरहेका या गर्न सक्ने देखिन्छ । इथोपियन एयरलाइन्सको दुर्घटनामा पनि हामीले एकजना नेपाली चेली गुमायौं, नेपाली उड्ययन प्राधिकरण भनें म्याक्स ८ को विषयसंग जोडेर विश्वभरिका नेपालीजनको सुरक्षाको कुरामा उदासिन छ । तथापि विश्वभरिका नेपालीलाई सकेसम्म यस मोडलमा यात्रा नगर्न र सुरक्षित हुन हामी सल्लाह दिन्छौं । हवाइयात्रामा लिएको जोखिमको मृत्यु सिवाय अन्य कुनै परिणाम हुँदैन । सतर्क रहौं ।